ဆိုင်မွန်ဒီ ဗျူးဗွား - ဝီကီပီးဒီးယား
ဆီမုန်း လူစီ အားနက်စတင်း မာရီ ဘားထျန် ဒီဗိုးဗွား (အင်္ဂလိပ်: Simone Lucie Ernestine Marie Bertrand de Beauvoir; UK: /də ˈboʊvwɑːr/, US: /də boʊˈvwɑːr/, ပြင်သစ်: [simɔn də bovwaʁ] ( နားဆင်); ၉ ဇန်နဝါရီ ၁၉၀၈ – ၁၄ ဧပြီ ၁၉၈၆) သည် ပြင်သစ်လူမျိုးစာရေးဆရာ၊ ပညာတတ်၊ ဖြစ်တည်မှုဒဿနိကဝါဒီ၊ နိုင်ငံရေးလှုပ်ရှားတက်ကြွသူ ၊ အမျိုးသမီးဝါဒီ နှင့် လူမှုရေးသီအိုရီသမား တစ်ဦးဖြစ်သည်။ ကိုယ်တိုင်က ဒဿနိကသမားတစ်ဦးဟု ခံယူခြင်းမရှိသော်လည်း အမျိုးသမီးဖြစ်တည်မှုဝါဒ နှင့် အမျိုးသမီးဝါဒသီအိုရီများအပေါ် သိသာထင်ရှားစွာ လွှမ်းမိုးမှုရှိခဲ့သည်။
ဆိုင်မွန်ဒီ ဗျူးဗွား (၁၉၆၇)
(1908-01-09)၉ ဇန်နဝါရီ၊ ၁၉၀၈
၁၄ ဧပြီ၊ ၁၉၈၆(1986-04-14) (အသက် ၇၈)
ပါရီတက္ကသိုလ် (B.A., M.A.)
ဝတ္တုများ၊ အက်ဆေးများ၊ အတ္ထုပတ္တိများ၊ ကိုယ်ရေးအတ္ထုပတ္တိများ၊ ဒဿနိက နိုင်ငံရေး နှင့် လူမှုရေး အရေးကိစ္စများ နှင့်ပတ်သက်သော စာတမ်းများကို ဒီဗိုးဗွါးက ရေးသားခဲ့သည်။ ၎င်း၏ ၁၉၄၉ ခုနှစ်ထုတ် အမျိုးသမီးများအပေါ်ဖိနှိပ်မှုနှင့် ခေတ်ပေါ်အမျိုးသမီးဝါဒတို့အား အနုစိတ်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာသုံးသပ်ထားသော စာတမ်း ဒုတိယတန်းစားလိင် အပြင် She Came to Stay နှင့် မန်ဒရင်းများ အပါအဝင် ဝတ္တုများ အစွဲပြု၍ လူသိများထင်ရှားသည်။ ပြင်သစ်လူမျိုး ဒဿနိကပညာရှင် ယန်းပေါလ်ဆာ့တ် နှင့် သက်ဆုံးတိုင်ဆက်နွယ်မှုကြောင့်လည်း လူသိများသည်။
↑ Wells, John C. (2008). Longman Pronunciation Dictionary, 3rd, Longman. ISBN 978-1-4058-8118-0။
↑ Jones, Daniel (2011), Roach, Peter; Setter, Jane; Esling, John, eds., Cambridge English Pronouncing Dictionary (18th ed.), Cambridge University Press, ISBN 978-0-521-15255-6 Unknown parameter |mode= ignored (help)
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=ဆိုင်မွန်ဒီ_ဗျူးဗွား&oldid=475106" မှ ရယူရန်
၆ စက်တင်ဘာ ၂၀၁၉၊ ၁၀:၄၀ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး တည်းဖြတ်ခဲ့သည်။
ဤစာမျက်နှာကို ၆ စက်တင်ဘာ ၂၀၁၉၊ ၁၀:၄၀ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။